wararka maanta-arlaadii.net » Nin Xaaskiisa Si Farsameysan Ugula Baxay Kilideeda
Booliiska dalka Hindiya ayaa xabsiga dhigay labo nin oo Walaalo ah , kadib markii ragaasi lagu eedeeyay in si farsameesan kili ugala baxeen Haweeney uu qabay mid kamid ah ragan la xiray.
Ninka Xaaskisa kilada kala baxay ayaa la sheegay in xaaskiisa uu ka waayay lacag gabaati oo caado ka ah in haweenka Hindiya siiyaan raga guursada, waxa uuna ninkan ugu dambeyn ku fekeray in uu kili kala baxo xaaskiisa si uu lacag uga helo.
Warbaahinta dalka Hindiya oo dhacdadan si weyn uga hadashay ayaa sheegtay in ninkan xaaskiisa ku qanciyay in ay galayso qaliin xagga qabsinka ah kadibna markii ay caloosha ka cabatay labo sano ka hor ah.
Haweeneyda lagala baxay mid kamid kilaheeda oo lagu magacaabo Rita Sarkar ayaa xanuun daran dareentay , waxaana qoyskeesa markii Isbitaal geeyeen laguna sameeyay baaritaan la ogaaday in hal kili ay ka maqan tahay.
Waxa ay sheegtay Haweeneydan in ninkeeda uu mar walbo weydiisan jiray lacagta gabaatiga ah oo dalka Hindiya laga mamnuucay sanadkii 1961-dii balse wali dhaqan ahaan dalkaasi looga isticmaalo.
Rita Sarkar ayaa sheegtay in ninkeeda si joogta ah ugala kulmi jirtay dhibaatooyin badan, waxa ayna sheegtay xiligii qaliinka lagu sameenayay in uu ka codsaday in aysan cidna u sheehin qaliinka ay gashay.
Booliiska dalka Hindiya ayaa furay gal dacwadeed ku aadan kiiska haweeneydan sida farsameesan kilida looga baxsaday, waxaana dalka Hindiya mamnuuc ah in la baxsado oo dhaqaalo lagu raadiyo xubnaha bini’aadamka.